Tun Tun's Photo Diary: Portrait Photography #8
Portrait Photography #8
ဒီမော်ဒယ် က အော်ဇီသူပါ။ ဂျက်စီကာ လို.ခေါ်ပါတယ်။ သူ.ကို ဒီမော်ဒယ် နဲ. တနေ၇ာ ထဲမှာ အတူတူရိုက်ခဲ့တာပါ။ သူတို. တွေ အဲ့နေ.က ရေကူး ၀တ်စုံ ၂စုံလဲပါတယ်။ နောက် ၀တ်စုံ နဲ. ပုံတွေကို လဲ ကြည့်ချင်တယ် ဆိုရင် တင်ပေးပါဦးမယ်။ :) ဒီမော်ဒယ်က မျက်နာက တော်တော်လေး ဆွဲဆောင်မူရှိတယ်။ အရမ်းလဲ ကြိုးစားတယ်။ ဓါတ်ပုံ ဆရာ တွေ ပြောတဲ့ အတိုင်း အတက်နိုင်ဆုံး ကြိုးစားပြီး လုပ်သွားတာမြင်ရတယ်။ တချို.မော်ဒယ်တွေ ဆိုရင် လုပ်ချင်သလိုလို မလုပ်ချင်သလိုလို လုပ်တာတွေ ကြုံဖူးပါတယ်။
This is the another model that I shot on the same day along with this model at Tanjong Beach. Her name is Jessica and she is from Australia. She isagreat model with very beautiful face. I can see that she tried very hard in posing and very co-operative with the photographers. Models changed2swimsuits on that day, I still have photos of both of them with another swimsuits. If you guy would like to see, I will make an another post. :)
Camera - Canon550D
Lens - Tamron 18-270mm F/3.5-6.3 & Canon 50mm F/1.8
Date Taken - 29-Jan-2012
at 8/19/2014 07:25:00 AM
Labels: Model, Portrait
Anonymous August 19, 2014 at 7:56 AM
Great looking photos.
Next post with another swimsuits pls :)
Mite Tel, Bro ;)
Portrait Photography #9
Portrait Photography #7
Korean BBQ (Kkondgon BBQ)
Batam, Indonesia (2 Days 1 Night) #2
Batam, Indonesia (2 Days 1 Night) #1